Ahoana ny fomba hamonoana ny kaontiko amin'ny Internet Twitter? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 783
Para vonoy ny kaontinao amin'ny Internet, Mpampiasa Twitter: Mila miditra ao amin'ny kaontinao Periskope ianao, tsindrio ny sary famantarana ny Profileo ary safidio ny setting avy amin'ny menio mipoitra, kitiho ny kaonty Deactivate.
Aorian'ny fikitihana Kaonty reactivate, misy boaty fifanakalozan-kevitra metodetika hita eo amin'ny efijery, ny mpampiasa Twitter dia manindry ny kaonty Deactivate hanamafisana ny famonoana ny kaonty. Vantany vao vita ny fomba fanao, dia tsy manana kaonty Twitter miasa intsony ny mpampiasa.
Rehefa misafidy kaonty Deactivate ilay Mpampiasa Twitter dia anontaniana izy fanamafisana ny fanapaha-kevitrao mampiato. Raha misafidy ny misintona ny angon-drakitra manokana ianao dia mipoitra ny tondro fampidinana iray raha eo am-panaovana ny fangatahanao; nahavita ny fangatahanao ary nanomboka nisintona rakitra niaraka tamin'ny data-nao.
Mialà ao amin'ny kaontiko Periskope
Raha ilay mpampiasa Twitter very ny findainy ary mila mivoaka amin'ny Kaonty Periskope ianao; Ho an'ity tanjona ity dia tsy maintsy arahin'ity fomba ity ianao: Araho ny dingana miaraka amin'ny fitaovana iOS na Android; Raha tafiditra ao amin'ny Periscope miaraka amin'ny kaonty Twitter ianao dia mandehana any amin'ny fikirana Twitter ao amin'ny PC-nao.
Safidio ny hanafoanana ny fidirana mifanaraka amin'i Periscope; Safidio ny hanafoanana ny fidirana amin'ny Twitter na iOS na Twitter ho an'ny Android, miankina amin'ny fitaovana ananan'ilay Mpampiasa izany. Aorian'ny fisintomana ny rindranasa Periscope amin'ny findainao vaovao, midira ao amin'ny kaonty Periscope anao.
Farany, safidio ny Profile, Fanamboarana sy fanidiana fivoriana amin'ny fitaovana rehetra. Ankehitriny ny mpampiasa Twitter dia nanaja ny fomba fiasa rehetra hialana amin'ny kaonty Periskope, dia manana safidy hiditra ao amin'ny findainy vaovao izy.
MAMORATRA TALOHA TWITTER
Para mamorona Stream, Ny mpampiasa Twitter dia tsy maintsy: Tsindrio ny vakizoro Fampitana, kitiho ny Mamorona fampitana, ampidiro ireo saha takiana: Anaran'ny fandefasana, Sokajy: Ahoana no hamaritanao ny fandefasana anao? ary loharano.
Ny mpampiasa Twitter dia mitaky ny fisafidianana a Safidy fihainoana: Public na tsy miankina; misafidiana safidy Fandaharam-potoana: Manomboha avy hatrany na manomboka manaraka; sokafy ny fikirana mandroso; fameperana votoaty misokatra: Ampidiro na esory.
Horonan-tsary manomboka amin'ny encoder mankany amin'ny loharano ary zahao raha mampiseho horonan-tsary ny mpamokatra topi-maso; Ny fikitihana ny Fampitana fifindrana, ny mpampiasa Twitter dia manana safidy hisafidy: Atombohy avy hatrany na Manomboha avy eo.
Tweet ary atsaharo ny fandefasana amin'ny Twitter
Ao amin'ny sehatra Twitter, ny mpampiasa dia manana safidy Bitsika ny Broadcast, manatrika ireto fomba manaraka ireto: Tsindrio ny tabilao Transmission; tsindrio ny fampielezam-peo efa misy; Tsindrio ny bokotra Tweet ary vonona ny hiditra amin'ny Internet ianao.
momba mamarana Transmission, ny mpampiasa Twitter dia mila manaraka an'io fomba io: tsindrio ny tabilao Transmission, kitiho ny fifindrana efa misy, mankanesa any amin'ny farany ambany amin'ny fikandrana fampahafantarana fampitana.
Raha hikatona dia tsindrio ny mpampiasa Twitter ny Bokotra famaranana; Raha vantany vao tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fomba fiasa, haverina havoaka ao amin'ny Twitter ny fandefasana azy mba hankafizan'ny mpampiasa Twitter rehetra eo amin'ny sehatra Twitter.
1 Mialà ao amin'ny kaontiko Periskope
2 MAMORATRA TALOHA TWITTER
3 Tweet ary atsaharo ny fandefasana amin'ny Twitter